Kamisee: Godina Saba Oromoo naanno Amaaraatii eenyufaatu to'atame? - BBC News Afaan Oromoo
Walitti bu'insa dhiheenya kana naannoo Amaaraa Godina Saba Oromootti ka'e keessaa ''harka qabu'' namootni jedhaman to'atamaa jiraachuu poolisiin naannoo Amaaraa beeksisee ture.
Abbaan Alangaa waliigalaa naannoo Amaaraa Obbo Migbaaruu Kabbadaa namootni naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraatti nageenyi akka boora'uuf harka kessaa qabu jedhaman namootni 224 to'annoo jala ooluun qoratamaa jiraachuu himaniiru.
Obbo Migbaaruun akka jedhanitti namootni 150 tahan godinaalee gidduugalaa fi Lixa Gondar keessaa 42 bulchiinsa saba Oromoo Kamisee keessaa, 24 godina Hawwii fi saddet ammo godina Shawaa Kaabaa irraa akka to'ataman himaniiru.
Namoota shakkaman kanneen qabuufis qaama nageenyaa federaalaa fi aanolee waliin tahuun qorannoo gahaan irratti gaggeeffameera jedhanii shakkamtoota hafanis to'annoo jala oolchuuf gareen qorannoo gaggeessaa jiru cimsee hojjechaa jira jedhan.
Itti Gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa godina Saba Oromoo Obbo Abduu Mahaammad godina Kamisee irraa namootni baay'een qabamiiru jedhan.
Dabalataan yeroo jeequmsi ka'e namootni hedduun naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraa irraa dhufanii irratti waan hirmaatanii ammayyuu osoo hin qabamiin jiranis jiraachuu eeraniiru.
Haa tahu malee namoota qaban irratti qorannoon gaggeeffamaa akka jiruu fi kaanis adda baasuuf akka hojjetamaa jiran BBCtti himaniiru.
Bal'ina odeeffannichaa qorannoon booda miidiyaaf fi uummataaf ibsinas jedhan.
Caasaa mootummaa keessaas namootni shakkaman tokko tokko akkasuma to'atamuu isaaniis odeeffanneera.
Wal dhabdee godina addaa Saba Oromoo keessatti ka'e ilaalchisee qaama hidhatee socho'aa turetu dhukaasa jalqabe kan jedhu jiraattotni BBCtti himuun isaanii ni yaadatama.
Walitti bu'insicha gidduuttis lubbuun namaa darbee qabeenyis manca'ee ture.
Mootummaan federaalss haalicha tasgabbeessuuf poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa naannichatti bobbaasee ture.
Walitti bu'insicha keessaa harka qaba jechuun jiraattotni kan himataa turan paartii ABN jedhamu yoo tahu dabalataanis mootummaan naannoo beekadhuma humna poolisii addaa nutti bobbaase jechuun kan komatanis turan.
Haa tahu malee mootummaan naannoo Amaaraa walitti bu'insicha duuba WBOtu jira jechuun deebii kenne.
Waldhabdee sana keessatti sabni Oromoo naannoo aanolee akka Jiillee Xummuugaa, Daawwaa Caffaa fi Axaayee jiraatan tajaajila fayyaa hospitaala naannichaas dhabanii akka turaniifi bakka biraatti yaalamaa akka turan qondaalli mootummaa godinichaa yeroo sana dubbisne BBCtti himanii ture.
Kana irraa kan ka'es lubbuun namaa yaala argatee fayyuu danda'u illee akka darbe himaniiru.
Amma naannichatti tasgabbiin bu'uun himamee mootummaan namoota wal dhabdicha kakaasuu keessaa harka qabu jedhee shake adabaa jiraachuu jiraatota irraa odeeffanne.
Obbo Adam Sayid jiraataa godina Kamisee yoo tahu qaamni nageenyaa naannoo Amaaraa, poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin tahuun hanga gandaatti bu'uun namoota qabaa jiru jedhe.
Dargaggoota dabalatee milishootni gandaa fi caasaan nageenyaa ganda keessa jiranis akkasuma namoota to'ataman keessatti argamu jedhe Adam.
Kanaan dura qondaalli waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kutaa waraana Kaabaa walitti bu'insicha keessaa kan harka qabu qaamuma nageenyaa naannoo Amaaraati jechuun ibsee ture.
Kanaan dura waraana nutti bananii amma immoo nu hidhuuf dhufanii jennee Uummatni godinichaa jaarsolii biyyaa waliin walitti baanee marii gaggeessine.
Adam yoo dhalattoota Oromoo irratti qofa xiyyeeffachuun hidhu tahe qabeenyis manca'uu lubbuunis baduu danda'a ture jedhee amma garuu saba Amaaraa fi Oromoo keessaas waan taheef haalicha dhaggeeffachuuf callisne jedha Adam.
Haa tahu malee dargaggootni qabaman meeshaa waraanaa waliinidha kan jdhamu soba jedhee qeerroon keenya qabsaa'aa kan turan karaa nagaa hiriira bahuun, gaaffii dhiyeessuun malee meeshaa hidhachuun miti jedhe.
Haa tahu malee nama tokko shakkanii dhaqanii yommuu qaban mana sakatta'anii meeshaa waraanaa yoo argatan fudhatanii deemu jedhe.
Uummanni Walloo ijoollee keenya dabarsinee hin kenninu jennee erga qophoofnee booda saba lamaan irraa tahuu dhageenye jedha Adam.
Akka odeeffanno qabnutti caasaa nageenyaa, poolisii fi namootni walitti bu'insicha keessaa harka qabu jedhaman aanolee akka Jiillee Xummuugaa, Daawwaa Caffaa, Haxxumaa Fursee, Kamisee fi Axaayee irraa akka to'atamaa jiranidha BBCtti kan hime.
''Namni qabame hundi waraana kan gaggeesse jechuu miti waan taheef namoota kaan ragaaf barbaanna kaan ammoo qulqulleessuuf barbaannee qabne'' jedhanii karaa gaggeessitoota keenyaa nutti himan.
MM Abiy Ahimed dabalatee qaamoleen nageenyaa yeroo walitti bu'insichaa ibsa kennan caasaa mootummaa dabalatee namoota saboota walitti buusuuf hojjetan to'annoo jala oolchina jedhanii ture.
Walitti bu'insa uummata Oromoo fi Affaar gidduutti ka'aa ture keessaas namoota harka qabu jedhaman qabuuf akka hojii jalqabanii jiran dhageenyerra jechuun Adam BBCtti himeera.